ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ငိုချင်းရှည်မှာ ဆွဲထည့်ထားလို့ ၀မ်းသာဝမ်းနည်း စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်ရပါတယ်။
ရာဘာစေးခြစ်ဖို့တို့ ငါးဖမ်းဖို့ စပါးစိုက်ဖို့ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာက စောင့်မျှော်နေတယ် ဆိုပဲလေ။ ပြန်ဖို့လေးဘာလေး စိတ်ကူးဦး။ ယုတ်စွအဆုံး အင်းစိန်ဘက်မှာ တော့ ထမင်းအလကား ကျွေးတဲ့နေရာ ရှိတယ်ဆိုလား။
မပန်ပြောတဲ့ အလုပ်နဲ့ နေရာကိုဖတ်ပြီးလည်း
မပန်ပြောတဲ့နေရာကို ညီမတို့ကျောင်းကအစ်ကိုက ပဲဟင်းစားပြီး ချီးပုံးထမ်းတဲ့နေရာတဲ့။ အဲဒီအလုပ်ကအဆင်မပြေပါဘူး။ အစ်ကိုအဆင်ပြေပါစေ။
ဖတ်ရတာ စုံသွားတာပဲ..အကိုက နောက်တာလား တကယ်ပြောတာလား... ဒီမှာလည်း အလုပ် ရှာရခက်တဲ့သူတွေ တနေ့ထက်တနေ့ များလာတယ်။
အကိုရေ အကိုရေးထားတာကို တက်ဂ် တစ်ခုလို သဘောထားပြီး ကျနော်လည်း ရေးထားတယ်။
27 Jan 09, 10:48
mie nge: So funny for yr last post , thanks !
27 Jan 09, 11:01
နှင်း: အစ်ကိုရေ ဒီဘက်မှာလဲ ခပ်လှုပ်လှုပ်ရယ်... ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့..
27 Jan 09, 13:09
မေ့သမီး: အစ်ကိုရေ အလုပ်သစ်အမြန်ရပါစေ။ စိတ်ညစ်ရတာတွေကို ပိုစ့်ထဲမှာ ဟာသလုပ်နိုင်တဲ့အစ်ကို့ကို လေးစားပါတယ်။
27 Jan 09, 13:52
မိုးမောင်(happycloud): သဘောကျသွားပါတယ်.. ကိုအောင်သာ :)
27 Jan 09, 11:05
စိုးသင့်ဆွေ: အကိုအောင်သာငယ်ရေ.. အလုပ်အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေ
27 Jan 09, 14:14
tututha: အဟမ်း စဉ်းစားပေးရမှာပေ့ါ :)
27 Jan 09, 16:58
tiny: ကျမကတော့ အလုပ်ကို မရှာသေးဘဲ အရှုပ်တွေချည့် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့ လုပ်နေတုန်း...ဆိုတော့ အလုပ်ပြုတ်တဲ့ အရသာကို မမြည်းရသေးဘူး။
အကိုကြီး နယူးရီးယားမှာ ၂ သန်းသုံးလိုက်တာ အကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲ သိတာနော် အခု အကိုကြီး ဖွလိုက်လို့ အိမ်ကမိန်းမသိပြီး နှင်ချရင်တော့ အကိုကြီးဆီပဲ လာနေမှာ ဒီတော့ ဆီတွေအိုင် မှာ အလုပ်ရအောင်သာ ဖိဖိစီးစီး လုပ်ထားပေတော့ ငှီး ငှီး ငှီး
ဟာသဥဏ် နဲ့..အရေးညက်ညက် ကြောင့်..
ရင်မော နေရမှန်း သိပေမဲ့..
အိမ်ထောင်ဦးစီး တစ်ယောက် အနေနဲ့..
အလုပ် မရှိဘူး ဆိုတဲ့..အနေအထား ဟာ.
ဘယ်လောက် ခက်ခဲ မလဲ ဆိုတာ်..
ရီစရာတွေ ဖတ်နေရင်း..ခံစား လို့ ရပါတယ်....
အစစ အရာရာ..အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေစေဘို့....
မသက်မသာ သတင်းတွေကြားမှာ ဒီလို ဟာသလေး လုပ်ပြီးရီနိုင်တယ်ဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့။
အကို အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
အစ်ကိုက သရော်စာရေးတော့လည်း မိုက်တာပဲ။ အမောပြေသွားတယ်ဗျာ။
သရော်စာ ဆိုတာ ပထမပိုင်းကိုပြောတာဗျ။ အောက်ပိုင်းက စိတ်ကို ရွှင်လန်း စေမယ့် အပျော်စာ။ :-)
အိမ်မှာလဲ လာစားလို့ရပါတယ်။ လက်ရာကို သည်းခံစားနိုင်ရင်ပေါ့နော်။
အောင်မလေး နယူးရီးရားမှာ ၂ သန်း သုံးလိုက်တယ် ဘုရား ဘုရား ကိုလင်းထက် မိန်းမဖုန်း No. လေးသိပါရစေ :P
အကိုရေ..ကျနော်လဲ ..ဒီမှာ အိမ်တွင်းပုန်းလုပ်ရတာ အဆင် မပြေတော့ဘူး..အကို ဖွလိုက်တာနဲ့.. ရဲတွေသိကုန်ပြီ...အဲ့ဒါ အကို့ဆီမှာ လာပုန်းမလို့ ၁ နေရာ လောက်လေးလုပ်ပေးနော်..သိပ်မကြာပါဘူး..မသကာ မပျော်ရင် နောက်ဘဝ အထိလေးပဲပေါ့...
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး ပြန်သွားပါကြောင်း...
ပြင်သစ်မှာတော့ တနိုင်ငံလုံး ဆန္ဒပြကုန်ပြီ။ အလုပ်မရှိလို့တဲ့...
ဒေါင်းမင်း - စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ
မပန် - AirForce One နဲ့ လိုက်ပို့မယ် ဆိုရင်တော့ ပြန်ချင်ပါတယ်...း)
ဆင်ဒဏ်လား - များများရယ် များများပြုံးနိုင်ပါစေ...
မေ့သမီး - ကျေးဇူးပါ ညီမရေ့...
မီယာ - အတည်နဲ့ နောက်နေတာပါ...း)
ကိုအောင် - ကိုယ့်ညီရေးတာလည်း ကောင်းပါ့...
ကိုယော - လက်တို့ဖို့တောင် တန်းစီနေရသဗျ...း)
မနော် - အားကျတယ်ဗျို့...း)
မီးငယ် - ဖတ်သွားတာ ကျေးဇူး...
နှင်း - အစစ အဆင်ပြေပါစေညီမရေ့...
မိုးမောင် - ကျေးဇူးပါ ညီရေ့...
စိုးသင့်ဆွေ - ကျေးဇူးပါ ညီမရေ့...
မတူး - အားကိုးပါရစေ...း)
ငှက်ကလေး - အလုပ် မလုပ်ရသေးလေ ကောင်းလေပါပဲ...
လင်းထက် - ၂ သန်းပဲ သုံးမိတာပဲဟာ ...း)
ကိုဆောင်း - အလုပ်မရှိတော့ ပျော်စရာ မကောင်းဘူး...
ကေ၊ ပုံရိပ် - များများ ရယ်ပါ...
မမ ၊ ညီမချိုသင်း- ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ...
ကောင်းကင်ကို - အမောပြေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ညီရေ့...
mm - လမ်းကြုံရင်တော့ အိမ်မှာ လာစားမှာပဲ...း)
ကိုနေ - ကျေးဇူးပါ ညီရေ့...
မေမိုး - ယန်း ၂ သန်းပါကွယ် ...း)
ကိုဖုန်း - လာလေကွာ ကိုယ့်ညီအတွက် တံခါးဖွင့်ထားတယ်...
သက်ဝေ - ရယ်ရင်း သက်ပြင်းချလိုက်ပေါ့ကွယ်...း)
ကိုသက်ဦး - ဆန္ဒပြတဲ့အထဲမှာ ၀န်ကြီးချုပ် မပါဘူး မဟုတ်လား...း)
29 Jan 09, 22:49
မောင်ကျည်ပွေ့: သြော်...ဂလိုမျိုးလဲရေးတတ်တယ်နော်။ များများရေးပါဗျာ။ အကြောင်းအရာကော အရေးအသားပါ ဖတ်စ်ကလပ်ပဲဗျ :lol:
အစ်ကိုရေ စိတ်ကူးပေါက်လို့Hummer H2 ၀ယ်ရင် ကျနော့်အတွက်ပါ အကြွေးနဲ့တစ်စီးလောက် ဆွဲခဲ့ပါဗျို.။ အလုပ်ရရင် အကြွေးပြန်ဆပ်မယ်ဗျာ အခုတော့ ခဏလောက် စိုက်ထားပေးပါဦး :P
31 Jan 09, 04:54
ခင်လွန်း: အလုပ်သစ်လျှောက်ထားခြင်းကို ကူးသွားတယ်။ ကမ့်ထဲကလူတွေ ပေးဖတ်ဖို့ ဝေရမယ်လေ
ကိုကျည်ပွေ့ - ဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးဗျာ
ဇင်ယော်ကြီး - ဘာလဲ နင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ် ရာထူးရထားပြီပေါ့လေ..
ကိုခင်လွန်း - လာဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ